Sawirro: RW Cumar oo khudbad ujeediyey baarlamaanka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: RW Cumar oo khudbad ujeediyey baarlamaanka Soomaaliya
9th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho, 09, May, 2015…Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cumar Cabdirashid, oo ay wehliyaan Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka mudane Maxamed Cumar Carte iyo xubno ka tirsan golaha Wasiirada ayaa maanta hortagay golaha Baarlamaanka si uu uga horjeediyo barnaamijka xukuumadiisa, isaga oo faah-faahin ka bixiyey qorshayaasha horyaala xukuumadiisa.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in arrimaha amniga ay xukuumadiisa mudnaanta kowaad ugu jirto, wuxuuna xusay in xukuumaddu diyaarsay dadaalo wax looga qabanayo amniga, kaas oo ay iska-kaashanayaan shacabka iyo dowladda.
“Amnigu waa ahamiydda koowaad ee Xukuumadda; Haddii uusan amni jirin, dowladnimo ma jiri karto. Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, cadowga Al-Shabaab waxay muujiyeen ficilo waxashnimo ah, iyagoo laba jibbaaray gumaadka shacabka Soomaaliyeed. Waxaa socda tababar ay qaadanayaan ciidamo kummaandoos ah kuwaas oo ka howlgali doona goobaha codowgu kaga sugan yihiin dalka. Tababarka iyo taakuleynta ciidankaas waxaan iska kaashanaya dowladda iyo saaxiibadeena caalamka” ayuu yiri RW Cumar.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka warbixiyey waxayaalah uga qabsoomay xukuumadda dhanka federaalaynta dalka iyo dhisida maamul goboleedyada.
“Federaaleynta dalka, waxaan ku faraxsanahay inuu furmay, isla markaana si habsami leh u socdo shirka maamul u sameynta Gobollada Dhexe. Shirkaas wuxuu magaalada Cadaado ka furmay 16-kii April, waxaa haatan heer gabogabo ah maraya xulista odayaasha dhaqanka ee beelaha, kuwaas oo iyana soo xuli doona ergo ansixisa dastuurka maamulkaas, kaddibna soo xuli doonta xildhibaannada baarlamaanka maamulkaas, kuwaas oo kaddibna dooran doona guddoon, Madaxweyne iyo ku xigeenno” ayuu yiri RW Cumar
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in kulankii golaha wasiirada ee dhacay 07, May, 2015, ay ansixiyeen saddex guddi oo udub dhexaad u ah xaqiijinta higsiga 2016, waxaana gudiyadaas ka mid ahaa Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka, Gudigaas oo looga fadhiyo inuu dalka u diyaariyo hannaan doorasho sanadka soo socda. Wuxuuna Ra’iisul Wasaaruhu Golaha Baarlamaanka ka codsaday inay guddiyada madaxa banaan si dhakhso ah u ansixiyaan, si waajibaadkooda shaqo ay durbadiiba u guda galaan.
Sidoo kale, Ra’iiusl Wasaaraha ayaa sheegay in qabyo tirka Dastuurka uu ka mid yahay waajibaadyada ugu waaweyn ee horyaalla Xukuumadda iyo Golaha Shacabka. “Si aan u xaqiijinno waajibkaan, waxaan sameynnay Wasaaradda Dastuurka, oo masuuliyaddeeda koowaad ay tahay inay hoggaamiso sameynta dastuur dhammeystiran oo dadka Soomaaliyeed heshiis ku wada yihiin.
Wasaaradda oo garowsan culeyska waajibaadka horyaalla ayaa is-afgarad saddex geesood ah la saxiixatay Guddiga Madaxa Bannaan ee Dibu Eegista iyo Hirgalinta Dastuurka iyo Guddiga Baarlamaanka ee Dibu Eegista Dastuurka. Is-afgaradkaas wuxuu saldhig u noqonayaa wada shaqeyn dhex marta saddexda hey’adood, oo dhammaantood ka shaqeeya qabyo-tirka dastuurka” ayuu yiri RW Cumar
Ugu danbayntii RW ayaa ka codsaday Golaha Shacabka iney dedajiyaan ansixinta shuruucda hortaala iyo gudiyada madaxa banaan oo xukuumaddu hada dhistay, si dalkaan loo gaarsiiyo iney ka dhacdo doorasho marka lagaaro Sept, 2016.
Muqdisho: Taliyaasha Booliska iyo Asluubta oo la dhaariyey (Sawirro)
Imtixaan mideysan oo wasaaradda Waxbarashadu ku adkeysaneyso!